Muxuu Maraykanka ka bartay Afgaanistaan? - Diblomaasi
“Labaatan sano oo duqeymo diyaaradeed, dilal qorsheysan, iyo duqeymaha tuulooyinka fog fog ma ciribtirin argagixisada”
Sawirka waa Dagaalyahannada Taalibaan oo gaaf wareegaya madaarka rayidka ah ee Kabul ka dib markii ay si buuxda uga baxeen millatariga Maraykanka [Getty]
Karachi waa magaalada ugu weyn Pashtun ee jirta. Waa dekadda ay Afgaanistaan ​​kaga ganacsato adduunka, waxayna halbowlo u tahay badweynta ganacsiga. Karachi la’aanteed, suuqyada Afgaanistaan ​​ayaa maran.
Karachi sidoo kale waxay ku taallaa gudaha Pakistan dhexdeeda, oo aad uga fog soohdinta caalamku aqoonsan yahay, Durand Line. Ogaansho la’aanta ku xeeran dekedda weyn ee Afgaanistaan ​​waxay tilmaan u tahay falanqaynta caadiga ah ee Afgaanistaan ​​oo mugdi gelinaysa xaqiiqda adag ee dalka.
Burburkii ugu dambeeyay ee Jamhuuriyadda Afgaanistaan ​​ee 20-jirka ah iyo is-dhiibidda magaalooyinkeedii waaweynaa waxaa fajaciso ku noqday reer Galbeedka faallooyinka iyo dhagaystayaashaba. Sababta oo ah warbixinta reer galbeedku dhif iyo naadir ayey xustay in Taalibaan ay dhab ahaantii muddo dheer gacanta ku haysay baadiyaha, halkaas oo saddex meelood meel ka mid ah bulshada Afgaanistaan ​​laga helo.
Indho-indhaynta dabeecadda dhabta ah ee taliskii Ghani wuxuu ahaa khalad dilaa ah, oo awood u siiyay dhalanteedka horumarka ciidamada milatariga reer galbeedka. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidaasi oo kale ku qirtay 31-kii bishii Ogoosto khudbaddii uu u jeediyay shacabka Mareykanka kadib bixitaankii Mareykanka, isagoo xusay in dowladda Afgaanistaan ​​“musuqmaasuq iyo wax isdabamarin” ay awood u siisay guushii Taalibaan.
“Warbixinnada reer Galbeedka marar dhif ah ayay xuseen in Taalibaan ay dhab ahaantii muddo dheer gacanta ku haysay baadiyaha”
Qiyaasaha qaar, ku dhawaad ​​laba tirilyan oo doollar ayaa lagu kharash gareeyey qabsashadii Mareykanka ee Afgaanistaan. Qayb muhiim ah oo ka mid ah khasnaddan ayaa loo weeciyey khasnadaha xulafada Mareykanka ee Afgaanistaan. Hal cabbir oo musuqmaasuqani waa tirada badan ee guryaha raaxada iyo meheradaha ay ka heleen aqoonyahannada reer Afgaanistaan ​​ee Dubai.
Tallaabo kale ayaa ahayd Ciidanka Qaranka Afgaanistaan ​​(ANA) lafteeda, oo inkasta oo la sheegay inay garayaan ilaa 300,000 oo xoog leh, haddana dhab ahaantii ay ahayd mid aan u muuqanin tiradaasi. Ciidankii ANA waa la buunbuuniyey si loogu oggolaado saraakiisha kleptocratic inay xaddaan mushaharka. Baaxadda musuqmaasuqa ayaa muddo dheer lagu tilmaamaa warbixinno faahfaahsan oo ay soo saartay SIGAR, oo ah hay’ad loo abuuray inay dib u eegto mashaariicda milateri ee Maraykanku ka wado Afgaanistan.
Dawlad-goboleed aad u weyn ayaa sidoo kale ka hanaqaaday maamulka Madaxweyne Ghani waxaana si fudud uga faa’iidaystay dabaqadda siyaasadeed ee Afgaanistan. Madaxweynihii hore ee Ghani, Hamid Karzai ayaa walaalkiis u magacaabay inuu kormeero gobolka Kandahar halkaas oo uu ku mashquulsanaa inuu noqdo madaxa ganacsiga opium-ka ee maxalliga ah. Aakhirkiina waa la dilay.
Walaal kale oo Karzai ah ayaa lala xiriiriyay burburkii Bangiga Kabul – qorshaha Ponzi oo loo ekeysiiyay hay’ad maaliyadeed oo gacan ka geysatay maalgelinta hab-nololeedka qaaliga ah ee dadka reer Kabul, oo markaas la baxsaday inta badan dhaqaalihiisii, taasoo keentay in Afgaanistaan ay noqoto mid ka mid ah dowladaha ugu saboolsan Aasiya si ay ugu biishaan.
Arrimaha muhiimka ah ee la soo jeediyay ka hor booqashadii Senator Joe Biden ee Afghanistan ee 2018 waxaa ka mid ahaa: “kororka weerarada argagixisada, soo-saarka maandooriyaha & ka ganacsiga, awood la’aanta dowladda dhexe, musuqmaasuqa baahsan” iyo niyad-jabka baahsan ee dowladda Karzai. – Wikileaks
Xilligii taliska uu Maraykanku taageerayay, Afgaanistaan ​​waxay sidoo kale gaartay sumcaddii caanka ahayd ee marti-gelinta xarumo badan oo jir-dil iyo goobo madow oo dhibbanayaal aan tiro lahayn loogu gaystay. Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah ayaa hadda ku hawlan geedi socodka ee aan la aqoonin wakhtiga la soo bandhigi doona ee baaritaanka dambiyadan iyo kuwa kale ee ka dhacay Afgaanistaan.
Xilligii taliska uu Maraykanku taageerayay, Afgaanistaan ​​waxay sidoo kale gaartay sumcaddii caanka ahayd ee marti-gelinta xarumo badan oo jir-dil iyo goobo madow oo dhibbanayaal aan tiro lahayn loogu gaystay. Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah ayaa hadda ku hawlan geedi socodka ee aan la aqoonin wakhtiga la soo bandhigi doona ee baadhitaanka dambiyadan iyo kuwa kale ee ka dhacay Afgaanistaan.
Isla mar ahaantaana, dimuqraadiyadda Afgaanistaan ​​uma xiddidmin sidii loo qorsheeyay, faragelinta joogtada ah ee Maraykanku ku hayo doorashooyinka Afgaanistaan ​​ayaa looga baahnaa in dhismuhu sii ahaado mid haggaagsan.
Tani waxay ku dambaysay qaab-qaybsiga awood-qaybsiga ee dawladda Madaxweyne Ghani oo ay sidoo kale ku jirtay Madaxa Fulinta-khayaali-dastuuri ah oo dheeri ah oo Maraykan ah oo loo qoondeeyay inuu sii wado “dimuqraadiyadda”. Taa bedelkeeda, hoggaankii Daalibanka ee isaga u gaarka ahaa ayaa inta badan ka madax bannaanaa dhagartii Byzantine.
Taalibaan, geedi socodka Doha waxay aqoonsatay xaqiiqda siyaasadeed ee Taalibaan markii ay si wax ku ool ah u garab istaagtay maamulka Ghani, si layaab lehna, Mareykanku wuxuu hadda saldhigiisu noqon doonaa safaaradda Afgaanistan ee Qadar, maadaama Taalibaanku ay xoojinayaan qabsashadooda Afgaanistan.
Markii hore dhaqdhaqaaq u badnaa Pashtun, Taaliban ayaa hadda matalaysa in badan oo ka mid ah kooxaha qowmiyadaha kala duwan ee Afgaanistan. Waxayna u sheegeysaa in dhulalka Badakshan, oo aad uga fog gobollada dhaqanka Pashtun ee Koonfurta iyo Bariga, ay si fudud gacanta ugu galeen Talibs, kuwaas oo sida la sheegay isticmaalay isku-darka ololaha baraha bulshada iyo dhaqaallaha maaliyadeed si ay uga dhaadhiciyaan ciidamada dowladda inay is dhiibaan ama dhinac u kala wareegaan.
Toddobaadyada soo socda ayaa la ogaan doona Afgaanistan. Haddii Taalibaan doortaan waddada dib-u-heshiisiinta iyaga iyo cadowgoodii hore, waxoogaa horumar ah ayaa la gaari karaa. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay u baahan doontaa in Taalibaan ay wax ka beddelaan hab-dhaqankooda, rajada si sax ah loogu tixgeliyo shakiga la siiyay rabitaankooda rabshadaha, xaddidaya xuquuqda haweenka, iyo diidmada inay la jabaan kooxaha argagaxisada sida Taalibaanka Bakistan iyo al-Qaacida.
Waxaa laga yaabaa in caqabaddooda ugu daran ay ka timaaddo dabeecadda Afgaanistan lafteeda. Ka dib markii ay ciribtireen iska caabbinta gobolka ugu dambeeyay ee Panjshir 6-dii Sebteembar, malayshiyadu waxay si dhakhso ah u ogaan doontaa in hoggaaminta kacdoonku ay ka duwan tahay inay maamusho dowlad qowmiyado badan oo adag. Dadka reer Afgaanistaan ​​ee caadiga ah uma badna inay si tartiib ah u aqbali doonaan wareegtooyinka qallafsan iyo bahalnimada aan loo meel dayin ee ahayd astaamihii taliskii Taaliban 1990-yadii.
Dhismaha siyaasadda arrimaha dibedda ee Mareykanka waa inay dib uga fiirsataa habkii hore ee Afgaanistaan. Labaatan sano oo duqeymo diyaaradeed, dilal qorsheysan, iyo hub casri ah oo lagu duqeynayey tuulooyinka fog fog ma ciribtirin argagixisada.
Taa baddalkeeda, hababkaas arxan darrada ah ayaa ka dhex abuurtay carro qoto dheer dadka reer Afgaanistaan. Duqeyntii “aargoosiga” ahayd ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Kabul ka dhacday 29kii Ogoosto ayaa lagu dilay qoys ka kooban 10 qof, oo ay ku jiraan siddeed carruur ah, xitaa iyadoo saraakiisha Maraykanku ay ku adkeysanayaan in duqeyntan loola dan lahaa in lagu joojiyo weerar ku soo fool leh IS Khorasan.
Iskaashiga joogtada ah marnaba laguma kobcin karo xeeladaha noocaas ah, si kasta oo lacag loo kharash gareeyo.
Related Topics:FeaturedMuxuu Maraykanka ka bartay Afgaanistaan?
Dagaalka Drones-ka: Saamaynta ay leedahay faragelinta Mareykanka ee Soomaaliya oo sii dheeraatay
Pentagon-ka ayaa sheegay in awood u yeelashada Boqortooyada inay iibsadaan gantaalada hawada laga sameeyo ee Maraykanka ay “horumarin doonto amniga wadan aan saaxiibo nahay”.
Mareykanka ayaa ansixiyay in $650m laga iibiyo Sacuudiga gantaallada hawada laga rido, Pentagon-ka (magaca loo yaqaano ciidamada Mareykanka) ayaa ku dhawaaqday, taasoo noqon doonta heshiiskii ugu horreeyay ee maamulka madaxweyne Joe Biden uu la galo boqortooyada Khaliijka.
Bayaan ay soo saartay Khamiistii, Pentagon-ka ayaa lagu sheegay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ay ansixisay iibinta si ay uga caawiso Riyaadh inay ka hortagto khataraha hadda iyo mustaqbalka.
“Iibkan la soo jeediyay wuxuu taageeri doonaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo amniga qaranka ee Mareykanka iyadoo gacan ka geysaneysa hagaajinta amniga waddan saaxiib ah oo sii ahaanaya awood muhiim u ah horumarka siyaasadeed iyo dhaqaale ee Bariga Dhexe,” ayuu yiri Pentagon-ka Mareykanka.
Waxay intaa ku dartay in shirkadda fadhigeedu yahay Massachusetts ee Raytheon ay noqon doonto “qandaraaslaha maamulaha” iibka AIM-120C-7/C-8 Advanced Range Range Air-to-Air Gantaalaha (AMRAAM) iyo qalabka la xiriira.
Iibka ayaa imanaya bilo ka dib markii madaxweyne Joe Biden uu sheegay inuu joojin doono taageerada Mareykanka ee “hawlaha weerarka” Sacuudi Carabiya ee Yemen, oo ay ku jiraan “iibka hubka ee khuseeya”.
Xafiiska arrimaha siyaasadda iyo millatariga ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraalo taxane ah oo Twitter-ka soo dhigay Khamiistii ku sheegay in gantaallada aan loo isticmaalin “in lagu beegsado bartilmaameedyada dhulka”.
“Waxaan aragnay kororka weerarada xudduudaha ee ka dhanka ah Sacuudi Carabiya sanadkii la soo dhaafay,” ayay raacisay.
“Gantaalada Sacuudiga ee AIM-120C, oo laga soo daadgureeyay diyaaradaha Sacuudiga, ayaa kaalin muhiim ah ka qaatay ka hortagga weerarradan oo sidoo kale khatar geliyay ciidamada Mareykanka iyo in ka badan 70,000 oo muwaadiniin Mareykan ah oo Boqortooyada ku sugan ay halis ku jiraan.”
Iibka uma baahna ansixinta congress-ka, laakiin sharci-dajiyayaashu waxay joojin karaan heshiiska iyaga oo u gudbiya sharciga diidmada ee Guurtida iyo Wakiilada.
Gantaalkan ayaa waxa uu daba socdaa ansixintii Maraykanka ee heshiis dayac-tirka helikabtarrada oo dhan $500m oo loogu talagalay boqortooyada bishii Sebteembar.
Heshiiskaan ayaa wakhti horeba la dhaleeceeyay khamiistii, “Tani wax shaqo ah kuma lahan in dunida laga dhigo meel wanaagsan iyo wax kasta oo la xiriira hurinta dhaqaalaheena difaaca,” Marianne Williamson, oo ah qoraa iyo musharaxii hore ee madaxweynenimada, ayaa ku soo qortay Twitter. “Dhaqaalaha Ameerika waa in aan lagu dhisin wax iibinta dhimashada.”
Isaga oo musharrax ah, madaxweyne Joe Biden waxa uu Sucuudiga ku dhaleeceeyay dagaalka Yemen iyo dilka weriyaha fadhigiisu yahay Maraykanka ee Jamal Khashoggi.
Af-hayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in gantaalka hawada laga iibinayo uu “si buuxda u waafaqsan yahay ballan-qaadkii maamulka… in lagu hoggaamiyo diblomaasiyad lagu soo afjarayo colaadda Yemen iyada oo sidoo kale la hubinayo in Sucuudigu uu awood u leeyahay in uu iska difaaco weerarrada cirka ee Xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto. ”.
Faragelinta Sacuudiga ee Yemen ayaa billowday sannadkii 2015-kii markii ay Boqortooyada iyo isbaheysiga xulafadeeda gobolka ay bilaabeen olole duqeyn ah oo ka dhan ah fallaagada Xuutiyiinta ee dalkaas, kuwaasoo la wareegay caasimadda Sanca iyo inta badan dalkaas.
Sacuudiga ayaa Xuutiyiinta u arka in ay yihiin xulafada Iiraan, eedeymaha ay fallaagada iyo Tehran labaduba diideen. Dagaalku waxa uu horseeday masiibo bini’aadantinimo oo baaxad leh, Qaramada Midoobay ayaa sannadkii hore sheegtay in ku dhawaad ​​233,000 oo qof ay ku dhinteen colaadda.
Iyadoo ay sii kordhayaan weerarada xudduudaha ee Xuuthiyiinta iyo duulaanka fallaagada ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada istiraatiijiga ah ee Maarib, Sacuudi Carabiya ayaa bishii Maarso ku yaboohay xabad joojinta Yemen. Balse Xuutiyiinta ayaa ku gacan seyray soo jeedintaasi iyagoo ku nuux-nuux saday in go’doominta cirka iyo badda ee Sacuudigu hor kacayo ay tahay in la qaado shuruud la’aan ka hor inta uusan dagaalku dhamaan.
Mareykanka ayaa sheegey inay ka fiirsanayaan taageerada ay siiyaan Ciidanka Danab ee Soomaaliya. Arrintan ayaa ka danbeysey kadib markii ay soo bexeen warar sheegaya in Ciidamada Danab ay ka qeybgaleen dagaaladii maaalmihii dhawaa ka socdey magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Sarkaal ka tirsan safaarada Mareykanka ee Soomaaliya oo ka jawaabayey dalab ay VOA-du ku weydiineysey sida ay u arkaan ku lug lahaanshaha ciidamada Danab ee dagaalka Guriceel ayaa sheegey in Mareykanku ay siiyaan tabbabro iyo taageero kaleba ciidamada xooga dalka qeybtooda Danab si ay u gaaraan hadafka ay wadaagaan ee ah sidii looga adkaan lahaa Al-Shabaab.
Sarkaalka ka tirsan safaaradda Mareykanka ayaa sheegey in iyagoo eegaya dagaalkii Guriceel ay dib u eegi doonaan taageerada ay siiyaan Danab, si loo xaqiijiyo in taageeradaas loo adeegsado si ku habboon kuna qaabeysan siyaasadda iyo ujeedooyinka Mareykanka.
Horta marka hore waa kumaa Ciidamada Danab, maxaase Mareykanka ka galay?
Danab waa kumaandooskii ugu horraysay ee Soomaaliya ay yeelato tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka, sannadkii 1991. Dowladda Mareykanka ayaa bishii Oktoobar ee sannadkii 2013-kii bilowday tabbabarka ciidamada Danab, waxaana xilligaas lagu bilaabay hurin 105 askari ahayd.
Sida saraakiil dowladda ah laga soo xigtay ay sheegeen, ujeeddada loo sameeyay ciidanka ee xilligaas waxay ahayd in la hirgeliyo ciidan isku dhafan oo kumaandoos ah, waxaana lagu aasaasay saldhigga ciidamada cirka ee Belidoogle ee degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Ciidamadii ugu horreeyay ee Danab waxay tababarka dhameysteen sannadkii 2014-kii.
“Waa ciidanka loogu baahi badan yahay in dalka uu yeesho, sababtoo ah dagaalka aan ku jirno oo ah ku dhufoo ka dhaqaaq ama waxa Soomaalida u taqaano dagaal jabhadeed; Danab kaalinta ay ka qaadan karto waxaa weeye in ay yihiin ciidan tababar heer sare leh, awoodna u leh in ay baacsadaan Al-Shabaab, wiiqaanna awooddooda,” ayuu yiri Jeneraal Bariise oo horay usoo noqday taliye ku xigeenka ciidanka milateriga ee dowladda Federaalka.
Askeriga ku biiraya ciidanka Danab, waxaa la marsiiyaa baaritaan qoto-dheer oo lagu ogaanayo shakhsiyaddiisa, gaar ahaan in uu horay usoo noqday ciidan, in uu dembi soo galay iyo inkale, in uu mar uun ka mid noqday kooxaha Islaamiyiinta ah, in uu ku lug lahaa xadgudub dhanka xuquuqda aadanaha ah iyo waxyaabo kale oo lagu hubinayo askariga tayadiisa.
Kumaandooska Danab waxaa saldhigga Balidoogle ku tababara ciidamada Mareykanka ee ku sugan goobtaas, kana tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika. Sidoo kale saraakiisha kumandoosta Danab, gaar ahaan kuwa hoggaamiya dagaalka ayaa lagu soo tababaraa dalal dibadda ah oo Mareykanka uu ka mid yahay, halkaas oo ay ku soo qaataan tababarro dheeraad ah oo la xiriira hoggaaminta ciidanka xilliyada dagaalka.
Saraakiisha hoggaamisa ciidankan ayaa marka hore lagu tababaraa machadka barashada luuqadda ee Defence Language Institute (DLI) ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka, halkaas oo ay ku soo qaataan aqoon durugsan oo dhanka luuqadda ingiriiska ah.
Saraakiil hore uga tirsanaa ciidanka Danab, aqoon durugsanna u leh arrimaha ciidamadaas ayaa BBC-da u sheegay in Danab ay ka kooban yihiin guuto afar urur ah.
Taliska ciidamada Danab ee uu tababaray Mareykanka ayaa ku sugan saldhigga Balidogle ee gobolka Shabeelaha Hoose oo xarun u ah taliska ciidamadaas. Askarta halkaas ku sugan waxaa tiradoodu lagu qiyaasay 600.
Sidoo kale magaalooyinka Galkacyo iyo Kismaayo waxaa ku sugan min hal urur, waxaana hadda Jowhar laga hirgelinayaa urur kale oo ka hawgeli doona deegaannada Hirshabeele. Urur walba oo Danab ah waxaa uu ka kooban yahay boqol askari, sida saraakiishaas ay sheegeen.
Maxay tahay shaqadooda?
Si ka duwan ciidamada kale ee militariga Dowladda Federaalka, gaar ahaan kumaandooska Gorgor, Danab waxay howshoodu tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaana mar walba la arkaa iyagoo hawlgalo ka fulinaya goobaha ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha ururka xiriirka la leh Al-Qaacida ee Soomaaliya ku sugan.
Ujeedada ciidanka ayaa ah burburinta xarumaha ururka Al Shabaab ee tababarka ay ku qaataan. Waxaa u dheer tababar gaar ah oo ay ka mid tahay in diyaaradaha laga boodo; in jid gooyooyin ay dhigan karaan; iyo in ay fullin karaan hawlgal qorsheysan. Inta badan ma ahan ciidan hal meel loogu yimaado marka laga soo tago halka ay saldhigyada ku leeyihiin, waana ciidan guur-guura, weerarna qaada.
Tirada guud ee ciidamada Danab ee Mareykanka uu u tababaray Soomaaliya ayaa lagu qiyaasaa in ay gaarayso 800 oo askari. Ciidamada kale ee aan Danab ahayn ayuu Janaraal Bariise sheegay inay wanaagsan tahay in siyaasadooda tababarka lagu daro tababar gaar ah oo lamid ah kan ay qaataan ciidanka Danab.
Dowladda Mareykanka ayaa horay u sheegtay in tababarka ciidanka Danab ay sii wadi doonto ilaa iyo shan sano oo dambe. Ciidamadan ayey khubarada qaar aaminsan yihiin in markii hore ujeeddo kale loo sameeyay.
Cabdisalaam Guuleeed, oo horay usoo noqday taliye ku xigeenkii hey’adda nabadsugidda Soomaaliya ee NISA ayaa yiri: “Danab inkastoo ay ka mid yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, haddana waxaa aas aasay Mareykanka, gaar ahaan AFRICOM, ujeedka ugu weyn ee ay ka lahaayeen wuxuu ahaa difaacidda danahooda Iyo isku ilaalinta xarumaha ay Soomaaliya ka deggan yihiin”.
Wuxuu intaa ku daray: “Kadib waxay fahmeen in looga faa’iideysan karo waxyaabo badan, sidaasna waxaa lagu ballaariyey tirada ciidankaas iyo waajibaadkooda.”
“Waxay fuliyeen Boqollaal howlgal oo isugu jiray kuwo ay ku wehliyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa ay keligood ku ahaayeen”.
Xukuumadda Ankara ayaa sidoo kale Soomaaliya u tababarta ciidamo kumaandoos ah, kuwaas oo dad badan ay ku khaldaan ciidamada Danab.
Saraakiil militari hore ah ayaa sheegay in ciidanka dowladda Turkiga ay tababarto ay yihiin kumaandoos lagu magacaabo Gorgor, balse aanay ahayn Danab. Kuwa Mareykanka uu tababaro oo keliya ayaa loogu yeeraa Danab.
Yaa gacanta ku haya ciidanka Danab?
Ciidanka Danab waxay si toos ah u hoos tagaan Wasaaradda Gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya, waxayna si gaar ah ula shaqeeyaan ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya. Hubka ay hesytaan waxaa siiya dowladda Mareykanka, waxaana sidoo kale mushaarkooda bixiya Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka, inkastoo khubaro arrimaha militariga ku xeel dheer ayaa aaminsan in dowladda Federaalka ay wax ku biiriso daryeelkooda.
Wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa ciidankan siisay tababar militeri oo ka sarreeya kan ay qaataan askarta caadiga ah, haddii ay ahaan lahayd xagga jir-dhiska, u fikirka xeeladda dagaalka, isticmaalka hubka kala duwan, farsamada dagaalka, fulinta hawgallada xilliyada habeenkii, sancada, furfuridda miinada, fulinta hawlo gaar ah – sida in guriyo loo dhaco ama diyaarad ay ka daataan- hawgal gaar ahna soo fuliyaan.
Ciiidamo la mid ah Danab ayuu Mareykanka u dhisay dalalka Afrika ee ay ka jiraan kooxaha Islaamiyiinta sida Nigeria, Mali, Cameroon iyo kuwo kale balse Jeneraal Bariise oo horay usoo noqday taliye ku xigeenkii hore ee ciidamada militeriga ee Soomaaliya wuxuu sheegayaa in Mareykanka uu aaminsan yahay waxtarka ciidanka Danab.
“Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika, AFRIKOM, Jeneraal Townsend, waxaa uu hadda kahor inoo sheegay in ‘ciidamo lamid ah Danab ay u tababareen dalal badan oo Afrikaan ah balse kuwa Soomaalida ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee dhanka tababarka, kartida, geesinimada iyo xirfadda dagaalka’,” ayuu yiri Jeneraal Bariise.
Walow aanay jirin caqabado rasmi ah oo heysta ciidankan, mushaarkooduna ay bixiso dowladda Mareykanka, Dowladda Federaalkana ay wax ku biiriso, haddana saraakiishii horay uga soo shaqeysay waxay aaminsan yihiin inay jirto xasilooni darri dhanka hoggaanka ciidankan ah.
“Markii aan ka tagayay ciidanka, tirada guud ee askarta waxay aheyd 1,070 balse maanta waxay marayaan 800 oo askari oo tiradoodu way yaraatay, taasina waxaa ugu wacan xasilooni darrida ciidanka ee dhanka hoggaanka. Ciidanka hoggaankiisa in la siyaasadeeyo ma ahan, sababtoo waxay wiiqeysaa awooddooda iyo korriinka tiradooda,” sidaas waxaa BBC-da u sheegay korneyl Axmed Danab oo soo noqday taliyaha ciidamada Danab.
Axmed oo ahaa taliyihii ugu mudada dheeraa ee soo mara Danab ayaa intaas raaciyay in wax wanaagsan ay tahay in taliska cususb ee hadda ee ciidanka Danab aanan meel kale laga keenin balse laga soo dhex saaray isla ciidanka dhexdiisa.
Magaca Danab muxuu yahay, maxaase loogu bixiyay?
Ma ahan markii ugu horeysay oo ciidanka sita magacan laga aasaaso Soomaaliya, waxay ahaayeen ciidii kumaandooska ee jiray xilligii dowladii militariga ee Maxamed Siyaad Barre, balse waxay burbureen kaddib markii ay dhacday dowladdii dhexe. Ciidanka ayaa xilligaas lagu magacaabi jiray Danab.
Taliye Axmed Danab ayaa BBC-da u sheegay in sababta ciidankan markiisi horeba loogu bixiyay Danab ay tahay in ay yihiin ciidan il-biriqsi walba, meel walba si fudud oo sahlan ku geli karaan, hawlgalkii loo dirayana si dhakhsa ah ku soo fullin kara.
Shiinaha iyo Taiwan waxay ku kala qaybsameen dagaal sokeeye 1949-kii, inkastoo ay xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la leedahay Beijing oo keliya, Maraykanka ayaa weli ka go’an sharci si loo hubiyo in Taiwan ay iska difaaci karto khataraheeda dibadda kaga imaan karo.
Kuuriyada Waqooyi ayaa Sabtidii ku eedeysay maamulka madaxweyne Joe Biden inuu sare u qaaday xiisadaha milateri ee uu kala dhexeeyo Shiinaha iyada oo kaashaneysa “ka fiirsasho la’aanta” ee Taiwan, isagoo intaa ku daray in joogitaanka milatariga Mareykanka ee gobolka oo sii kordheysa ay halis weyn u tahay Waqooyiga.
Faallo ay siisay warbaahinta dowladda, wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Pak Myong Ho ayaa ku dhaleeceeyay Mareykanka in maraakiibta dagaalka uu u soo diro marin biyoodka Taiwan iyo in Taiwan uu siiyo nidaamka hubka oo la cusboonaysiiyay iyo tabbabaro ciidan.
“Faragelinta qarsoodiga ah” ee Mareykanka ee arrimaha ku saabsan Taiwan, oo Waqooyiga ay u aragto gabi ahaanba arrin gudaha Shiinaha ah, waxay ku hanjabtay inay taaban doonto “xaalad jilicsan oo ku taal gacanka Kuuriya.”
Hadalka Pak ayaa yimid maalin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu u sheegay dhacdo CNN townhall in Mareykanka ay ka go’an tahay inuu yimaado difaaca Taiwan haddii uu weerar kaga yimaado Shiinaha. In kasta oo ay taasi u muuqatay inay mugdi galinayso mawqifkii dheeraa ee Washington ee ahaa ilaalinta “madmadowga istiraatiijiyadeed” ee ku saabsan inay faragelin doonto haddii Shiinuhu uu weeraro Taiwan, afhayeenka Aqalka Cad Jen Psaki wuxuu sheegay in Joe Biden uusan wax dan ah ka lahayn inuu gudbiyo isbeddel siyaasadeed.
Shiinaha iyo Taiwan waxay ku kala qaybsameen dagaal sokeeye 1949-kii, inkastoo ay xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah la leedahay Beijing oo keliya, Maraykanka ayaa weli ka go’an sharci si loo hubiyo in Taiwan ay iska difaaci karto khataraha dibadda.
Kuuriyada Waqooyi ayaa si isa soo taraysa u dhaleeceysay doorka ballaaran ee amni ee Mareykanka ee Aasiya Pacific iyadoo ay sii xoogeysanayaan loolanka ay la leeyihiin Shiinaha oo ah saaxiibka weyn ee Pyongyang iyo nolosha dhaqaalaha. Bishii la soo dhaafay, Waqooyiga Kooriya waxay ku hanjabtay tallaabooyin ka hortag ah oo aan la cayimin ka dib go’aankii maamulka JoE Biden ee ah in la siiyo maraakiibta Nukliyeerka ah ee Australia.
“Waa wax la wada ogsoon yahay in ciidamada Maraykanka iyo saldhigyadooda milatari ee (Koonfurta Kuuriya) ay u adeegsadaan inay cadaadis saaraan Shiinaha iyo in ciidamada badan ee Maraykanka iyo dalalka satalaytka ah, oo lagu ururiyo meel u dhow Taiwan, ay awoodaan. waxaa ka go’an hawlgal milatari oo lagu bartilmaameedsado DPRK waqti kasta, ”ayuu yidhi Pak, isaga oo adeegsanaya soo gaabinta magaca rasmiga ah ee Waqooyiga, Jamhuuriyadda Dadka Dimuqraadiga ah ee Kuuriya.
Waxa uu sheegay in joogitaanka milatari ee sii kordhaya ee “ciidamada cadawga ah” ee Maraykanku hogaaminayo ee gobolka ay ku salaysan tahay “sheegasho curyaan ah” oo ah in Waqooyiga Kuuriya iyo Shiinaha ay dhibaato ka keeni doonaan Taiwan iyo Jasiiradda Kuuriya.
“Xaqiiqadani waxay caddaynaysaa in Maraykanku uu ku jiro dadaalkiisa uu ku doonayo inuu ku caburiyo waddankeenna iyo Shiinaha, labada waddan ee hantiwadaagga ah, si uu u sii haysto sarreyntiisa,” ayuu yiri Pak.
Wadahadalada Nukliyeerka ee u dhexeeya Washington iyo Pyongyang ayaa hakad ku jiray muddo ka badan laba sano arrinta ku saabsan dabcinta curyaaminta cunaqabateynta uu Mareykanku hoggaaminayo ee ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi taas oo beddelkeeda ah tallaabooyinka Waqooyiga ay ku baabi’inayaan barnaamijkeeda hubka nukliyeerka.
Pyongyang ayaa u aragta haysashada hubka nukliyeerka in uu yahay dammaanad qaadka ugu dambeeya ee badbaadada nidaamka qoyska Kim kaas oo dalka gacan bir ah ku maamulayay tan iyo 1940-meeyadii.
Dhammaadka bilaha fasaxa ah ee Sebteembar, Waqooyiga Kuuriya waxa ay sare u qaadaysay tijaabadeeda gantaallada iyada oo bixinaysa dalabyo nabadeed oo shuruud u ah Seoul, iyada oo dib u soo noolaynaysa hannaankii lagu cadaadinayey Kuuriyada Koonfureed inay isku daydo inay ka hesho waxa ay ka rabto Maraykanka.
Sung Kim, oo ah ergeyga gaarka ah ee Joe Biden ee Kuuriyada Waqooyi, ayaa la filayay in uu gaaro Kuuriyada Koonfureed Sabtida dambe si uu wadahadalo ula yeesho xulafada sidii dib loogu soo nooleyn lahaa wadaxaajoodkii Waqooyiga.
Ka bixitaanka maamulka madaxweyna Joe Biden ee Afgaanistaan ​​waxay hoosta ka xariiqday isbedel ballaaran oo Mareykanka uu diiradda saarayo ka hortagga argagixisada iyo waxa loogu yeero dowladaha qallafsan sida Waqooyiga Kuuriya iyo Iiraan. Taasi waxay diiradda saaraysaa ka-hortagga cadawga saaxiibka ah ee Shiinaha, qayb ka mid ah istaraatiijiyadaas muuqata waxay u muuqataa inay siinayso Waqooyiga dib u bilaabista wadahadallada iyada oo aan wax shuruud ah lagu xidhin.
Laakiin Waqooyiga ayaa ilaa hadda diiday fikradda wadahadalo furan, iyagoo sheegay in Washington ay tahay inay ka tagto “siyaasadeeda colaadeed,” ergeyga Kuuriyada Waqooyi ayaa inta badan adeegsata tixraaca cunaqabateynta iyo dhoolatuska milatari ee wadajirka ah ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed.
Falanqaynta: Tan iyo faragelintii Suuriya ee 2015, Ruushku wuxuu u weecday dhinaca Saxaraha ka hooseeya iyo Afrikada Dhexe, isagoo doonaya inuu helo dheemanka gobolka iyo miinooyinka dahabka ah oo uu ka hortago kuwa ka soo horjeeda siyaasaddiisa juquraafiga ah.
Toddobaadyo la isla dhexmarayay ka dib, waxaa hadda soo kordhaya caddeymo muujinaya in xubno ka tirsan kooxda calooshood u shaqeystayaasha Ruushka ee Wagner ay ku sugan yihiin Mali.
Si la mid ah sidii Ruushku u geeyay calooshood u shaqaystayaasha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe (CAR). Markay noqoto Afrikada ka hooseysa Saxaraha, dareenka guud ee Yurub iyo Galbeedka guud ahaan inta badan waa mid aad u yar, waddammada, ciidammada, iyo wakiillada ayaa ka faa’iidaysta si ay u ilaaliyaan ama u horumariyaan danahooda gobolka.
Aagga Saaxil, halkaas oo Faransiisku hore u ahaa gumeyste isla markaana hadda saaxiib la ah geopolitical-ka dalal dhowr ah, waa mid ka mid ah qaybaha ugu firfircoon adduunka, oo muhiim u ah amniga Midowga Yurub iyo qeybaha kale ee Afrika.
“Saaxil – iyo gaar ahaan, Chad, Mali, iyo CAR – waa fursad qaas ah oo u wanaagsan Ruushka si uu u geeyo qorshahiisa siyaasadda arrimaha dibedda ee uu markii hore ku soo bandhigay Ukraine oo kadib lagu horumariyay Suuriya iyo Liibiya”
Ruushka, oo qaaday tallaabo weyn oo siyaasadda arrimaha dibedda ah markii uu faragelin ku sameeyay Suuriya sannadkii 2015-kii, wuxuu u jeestay hadda dhinaca Saxaraha ka hooseeya iyo Afrikada Dhexe isagoo leh fikrad ah inuusan heli karin oo keliya dheemanka gobolka iyo macdanta dahabka ee gobolka balse uu sidoo kale caqabad ku yahay dadka ka soo horjeeda siyaasadda juquraafiga ah.
Saaxil iyo gaar ahaan, Chad, Mali iyo CAR – waxay Ruushka siinaysaa fursad qaas ah si uu u dejiyo qaabka siyaasaddiisa arrimaha dibedda ee uu ku soo bandhigay Ukraine oo lagu sii horumariyey Suuriya iyo Liibiya, oo ay ku jirto isku xirka danahiisa, saamayn ku yeelashada Kremlin-ka qalabka amniga, iyo ilaalinta guulahaas iyada oo loo marayo shirkado calooshood u shaqeystayaal ah sida Wagner.
Danaha Ruushka ee Afrika ayaa soo ifbaxay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, gaar ahaan ka dib faragelintii Suuriya ee 2015 iyo gelitaanka colaadda Liibiya iyada oo taageero ka heleysa ciidamada Taliyaha Qaranka Libya (LNA) Khalifa Haftar.
Diritaanka ciidan milatari iyo la taliyayaal ciidan waxaa inta badan ka horeeya diyaarinta ra’yiga dadweynaha iyada oo loo marayo dhacdooyinka dadweynaha iyo ololaha warbaahinta. Madasha Dhaqaalaha Afrika ee Ruushka, oo lagu qabtay 23-24 Oktoobar 2019 ee Sochi, ayaa warbaahinta Ruushku u soo bandhigtay inay tahay dhacdo siyaasad-juqraafi iyo dhaqaale oo muhiim ah.
Kremlin-ka wuxuu kor u qaadayaa kaalintiisa waddamada Afrika, kaas oo aan ku saleysneyn oo kaliya heshiisyada hubka ee sidoo kale ku saleysan aaladaha awoodda jilicsan sida maalgashiga, ganacsiga, iyo is-weydaarsiga dhaqanka. Maaha wax iska dhaca in diblomaasiyiinta Ruushku ay inta badan adeegsadaan faa’iidadooda muuqaalka guud ee Afrika – Ruushku ma ahan dal gumeystay qaaradda, si ka duwan Portugal, France, Britain, ama Italy.
Paris, oo ah awoodda milatari ee ugu weyn gobolka oo horseeday in dhowaan la soo afjaro Hawlgalka Barkhane ee ka dhanka ah kuuxda jihaad-doonka tan iyo 2014-kii, ayaa xaqiiqdii dareemaya in danaheeda khatar lagu yahay.
Labadii sano ee la soo dhaafay, oo ay kujirto kulankii G5 Sahel ee Pau bishii Janaayo 2020, hoggaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron wuxuu dhowr jeer la hadlay Madaxweynaha Chad Idriss Déby, iyadoo mid ka mid ah mowduucyada ay u badan tahay inay suuragal tahay iskaashi dhex mara N’Djamena iyo Ruushka.
Markii Déby lagu dilay weerar ay qaadeen jabhadaha XAQIIQADA bisha Abriil, waxaa la sheegay in Wagner uu ku tababaray saldhigga hawada ee Al Jufrah ee Liibiya, kaas oo loo adeegsado saldhigga ugu weyn ee Ruushka.
Kacdoonkii ugu dambeeyay ee Chad, dareenkii ka soo horjeeday Faransiiska ka dib dilkii Déby, iyo la wareegidda awoodda ciidanka – oo jeneraalladoodu ay ciidamo u direen Haftar hal sano ka hor – waa soo dhaweyn diirran oo loogu talagalay Ruushka iyo siyaasaddiisa Afrika.
Falanqaynta horumarka ballaaran ee gobolka ayaa muujinaya in tanaasulka macdanta ee Ruushka iyo keenista calooshood u shaqeystayaasha ay xiriir leeyihiin. Waxaa jira tusaalooyin ku jira CAR, waxaana laga yaabaa inay dhowaan wax badan ka jiri doonaan Maali.
Dowladda CAR ayaa billowday dheemman ka soo saaridda deegaan u dhow caasimadda Bangui bishii Luulyo 2018. Hawlahan waxaa fulinaya iyadoo gacan ka helaysa shirkadda Lobaye Invest, oo ay leedahay shirkadda fadhigeedu yahay St. Petersburg ee M Invest. Waxaa aasaasay Yevgeny Prigozhin, oo ka mid ah maal-galiyayaasha Wagner.
Labada shidaal ee Suuriya – waa mawduuca ay xiiseynayaan shirkadaha Ruushka ee xiriirka la leh Kremlin – iyo dheemanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waa alaabo qaali ah oo uusan ciyaaryahan kasta heli karin. Dheeman badan oo ku jira CAR ayaa si sharci darro ah loo qodaa oo loo dhoofiyaa si qarsoodi ah, taasoo horseedaysa qayb ahaan mamnuucidda dhoofinta caalamiga ah.
Horumarinta miinooyinka cusubi waxay ku soo beegmaysaa imaatinka calooshood u shaqeystayaasha Ruushka iyo heshiisyada u dhexeeya Bangui iyo Moscow, iyo sidoo kale dib-u-soo-nooleynta rabshadaha waddanka oo xubnaha Wagner ay si firfircoon uga qayb-qaadanayaan u hiilinta madaxweynaha faustin-Archange Touadéra.
Ilaa hadda, tirada calooshood-u-shaqaystayaasha Ruushka ee dalkaan ku sugan ayaa lagu qiyaasay inta u dhexaysa 2,200 ilaa 3,000. Dhacdooyinkan waxay ka horeeyeen heshiis lagu martigalinayo ku dhawaad ​​1,000 calooshood u shaqeystayaal ah oo reer Mali, taasoo dhalisay dhaleeceyn dheeraad ah oo ka timid Faransiiska, oo la yaaban sida looga baxayo Saaxil iyada oo aan la dhaawicin danaheeda.
Si kastaba ha noqotee, sida ay qabaan falanqeeyayaasha, Faransiisku wax dhibaato ah oo aasaasi ah kuma laha joogitaanka Ruushka ee gobolka.
“Faransiisku wuxuu si buuxda uga warqabaa tallaabada la taaban karo ee Wagner ee lagu taageerayo Haftar-ka Liibiya iyo Asad ee Suuriya – Paris waligeedna kuma dhaleeceynin jilayaashan sida ay ugu dhow yihiin istiraatiijiyadda Ruushka. Aamusnaanta Faransiisku waxay la mid tahay samafal, ”Jalel Harchaoui, oo ah xubin sare oo ka tirsan Global Initiative oo daboosha Waqooyiga Afrika oo diiradda saaraya Liibiya, ayaa u sheegay The New Arab. Kiiska CAR ma aha oo kaliya khilaaf xeeladeed oo u dhexeeya Ruushka iyo Faransiiska, sida uu qabo falanqeeye.
Runtii, joogitaanka calooshood u shaqeystayaasha Ruushka ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe dhib weyn uma aha Paris. Waxa hadda ka dhex muuqda Faransiiska iyo Maali waa qalalaase aan haba yaraatee wax xiriir ah la lahayn dhaqdhaqaaqii dhowaan Moscow ay ku gashay gobolka Saaxil. Intaa waxaa dheer, ma jiraan wax calaamado ah oo muujinaya in Paris ay ka baxeyso Maali waqti dhow; waxay si fudud u rabtaa inay dib-u-habayn ku samayso qaabkii faragelinteeda halkaas.
Dhanka kale, taliska milatariga hoggaaminayo ee Bamako ayaa doonaya inuu isku muujiyo xagga sharcinimada siyaasadeed kadib labadii inqilaab ee dhawaan dhacay 2020 iyo Maay 2021. Moscow waxay dareentay in hadalada ka imanaya labada caasimadood – Bamako iyo Paris – ay yihiin kuwo aad u macaan.
Hadallada rasmiga ah, Faransiisku wuxuu ka hadlayaa Wagner isagoo aan sheegin inuu xiriir la leeyahay Kremlin-ka, Maali-na waxay uga hadashaa Ruushka sidii inay awood u leedahay inay ku beddesho Faransiiska Saaxil. “Kormeerayaashu waa inay ilaaliyaan,” Harchaoui ayaa ka digaya, isagoo tixraacaya mala-awaalka ah in Ruushka iyo Faransiisku ay ka wada shaqeyn karaan dhulka.
Ruushku wuxuu doonayaa inuu dib u soo ceshado saamayntiisii ​​xilligii Soofiyeeti ee dhaqaalaha soo korayay, dhaqdhaqaaqa Ruushkuna kuma eka CAR iyo Maali oo kali. Warbixino ku saabsan tanaasulaadyo cusub oo laga sameeyay dalal ay ka mid yihiin Gabon, Suudaan, iyo Ruwanda ayaa iyaguna ka soo muuqday warbaahinta. Ruushka ayaa sidoo kale ergo iyo saraakiil milateri u diray Neyjeeriya, halkaas oo aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ah ilaa hadda.
Horumarkaan milateri iyo kan dhaqaale waxaa barbar socday olole warbaahineed, iyadoo warbaahinta Ruushku ay noqdeen kuwa si firfircoon uga shaqeeya tebinta dhacdooyinka Afrika iyo ka hortagga joogitaanka qaaradda ee Yurub.
Laakiin marka laga soo horjeedo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Saaxil iyo Bartamaha Afrika, ma jirtaa in khilaaf weyn uu dhici karo? “Waan ka shakisanahay taas,” Sergey Sukhankin, oo ah Sarkaalka Sare ee Cilmi-baarista Jamestown Foundation, ayaa u sheegay TNA.
“Faransiisku wuxuu horeba ugu jiray ‘khilaaf’ saaxiibbadiisa reer Galbeedka, marka laga reebo waxa loogu yeero xannibaadda Anglophone, sidoo kale waxaa ku jira Switzerland,” ayuu yirri. Sida laga soo xigtay falanqeeyaha, marka la eego isku darka dhibaatooyinka gudaha iyo sidoo kale xiriirka adag ee la-hawlgalayaasheeda istaraatiijiyadeed ee shisheeye, Paris ma raadin doonto iska hor-imaadka Moscow.
Isla mar ahaantaana, Ruushka oo si fiican uga warqaba dhibaatooyinka Faransiiska – ma doorbido isku dhac. “Waxaan rumeysanahay in tanaasul u dhexeeya labada la heli karo,” ayuu raaciyay Sukhankin.
Horraantii bishii Oktoobar, waxaa soo baxay warar warbaahintu qortay oo sheegaya in Ruushku u diray Maali diyaarado helicopter ah. Laakiin Sukhankin iyo Harchaoui, iyo sidoo kale goobjoogayaal kale oo caalami ah, ayaa shaki ka qaba in Moscow ay awood dhab ah geyso dalalka Afrika.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay warbixinnada wargeysyada Ruushka, Kremlin-ka ayaa laga yaabaa inuu si wanaagsan u adeegsado howlgalka Maali sidii fursad uu si rasmi ah ugu aqoonsan lahaa jiritaanka Wagner. Illaa iyo hadda, Moscow waxay beenisay inay wax xiriir ah la leedahay calooshood u shaqeystayaasha laakiin intii lagu gudajiray warbixin ku saabsan dariiqyada Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, Wasiirka Arrimaha Dibadda Sergei Lavrov wuxuu xusay heshiiska Maali. Dhab ahaantii, kani wuxuu ahaa markii ugu horreysay oo sarkaal Ruush ah uu ka xuso Wagner.
Warbaahinta Ruushka ayaa baahisay in la bilaabay qoritaanka dagaalyahannada, laakiin waxaa xiiso leh in la iska indho tiray musharrixiinta ka soo jeeda Crimea iyo Donbas. Sida laga soo xigtay Sukhankin, tani waxay la macno noqon kartaa in laamaha amniga Ruushku aysan ku kalsoonayn dagaalyahannada noocaas ah oo ay u raadin doonaan khabiiro hawlgalka Maali si looga fogaado dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo muuqaalka xun ee dadweynaha.
Sida laga soo xigtay Harchaoui, Ruushku wuxuu hiigsanayaa inuu abuuro daandaansi iyo sawir ah inuu khatar ku yahay saamaynta reer Galbeedka ee Saaxil. Hadda, Moscow waxay adeegsanaysaa qalab isku-dhafan, halkii ay kor u qaadi lahayd joogitaankeeda millatari.
Waxa loogu yeero Dagaalka Argagaxisada ayaa lagu sheegay warbixin in lagu dilay inka badan 48,308 qof oo rayid ah oo ku dhintay Bariga Dhexe, Soomaaliya iyo meelo kale oo ka dhashay duqeyntii Mareykanka, tan iyo weeraradii 11 Sebteember 2001, sida uu sheegay kormeeraha Airwars.
Labaatan sano ka hor, madaxweynaha Mareykanka George W. Bush wuxuu ku dhawaaqay “dagaal ka dhan ah argagixisada”. Maanta, guuldarradiisa lama dafiri karo, iyada oo kooxaha jihaad-doonka ah ay aad u tiro badan yihiin oo aad ugu kala firdhiyeen adduunka oo dhan.
Madaxweyne Bush wuxuu bilaabay dagaalka ka dhanka ah argagixisada kadib weeraradii 11-kii Sebteember 2001 ee New York iyo Washington kuwaas oo laga soo maleegay Afgaanistan sida ay sheegaan oo uu soo maleegay hoggaamiyihii Al-Qaacida Osama bin Laden, kaas oo gabbaad ka dhigtay taliskii waqtigaas.
Duullaanka uu Mareykanku hoggaaminayo ee Afgaanistaan ​​wuxuu meesha ka saaray Taalibaan wuxuuna hoos u dhigay awooddii Al-Qaacida, laakiin ma aysan sameynin wax ay ku tirtirto sababaha xagjirnimada Islaamiga ah ee rabshadaha wata, falanqeeyayaasha ayaa leh sidaaas.
“Waxay ku guuleysteen inay dilaan Osama Bin Laden,” ayuu yiri Cabdul Sayed oo ah cilmi-baare ku takhasusay jihaadka oo fadhigiisu yahay Jaamacadda Lund ee dalka Sweden, isagoo ka hadlayay dilkii ay ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ku dileen Bakistan sannadkii 2011-kii oo ahaa madaxii ururka Al-Qaacida.
“Laakiin haddii hadafku ahaa in la soo afjaro jihaad-doonka caalamiga ah, waa guuldarro gebi ahaanba,” ayuu yirri.
Maanta, argaggixisada jihaad-doonka ahi waxay isu beddeshay khatar caalami ah oo ka sii daran, oo ay soo mareen kooxo iyo shaqsiyaad kala duwan oo adduunka oo dhan ah.
Kormeerehu wuxuu dabagal ku sameeyay toddobo goobo oo iskahorimaad ka dhacay oo ay ku jiraan Ciraaq, Suuriya, Yemen, Afgaanistaan iyo Liibiya si uu u helo warbixin soo baxday maalmo ka hor sannad-guuradii 20-aad ee weerarkii Al -Qaacida ku qaaday Mareykanka, kaasoo dhaliyay Dagaalkii Argagixisada.
Air Wars ayaa sheegtay in ugu yaraan 22,679 qof oo rayid ah oo ku nool Bariga Dhexe, Afrika, iyo Koonfurta Aasiya lagu dilay ololayaal milateri oo uu hoggaaminayo Mareykanka tan iyo markaas.
Boqolkiiba 97 oo dad rayyid ah ayaa dhintay intii uu Mareykanka haystay Afgaanistaan iyo Ciraaq, iyo sidoo kale ololihii ay Washington hoggaaminaysay ee ka dhanka ahaa kooxda Dawladda Islaamka (IS) ee Suuriya iyo Ciraaq.
Mareykanka ayaa dhowaan soo afjaray dagaalkii 20-ka sano ee uu ka waday Afgaanistaan ​​bishii Ogoosto, iyadoo Taalibaan ay xukunka la wareegtay, iyadoo Madaxweyne Joe Biden uu wacad ku maray inuu soo afjari doono xilligii “dagaalladii weligood”.
Gumaysiga Ciraaq ee Maraykanku horkacayo wuxuu socday 2003 ilaa 2009, inkasta oo qaar ka mid ah ciidamadu ay weli ku sugan yihiin waddanka oo gacan ka geysanaya hawlgallada ka dhanka ah IS.
Washington ayaa qiratay in ciidamadeedu ay qaadeen 91,340 weerar tan iyo markii ololaheeda la-dagaallanka argagaxisada ee adduunka uu billowday 2001, ayay tiri Airwars.
Xilli si gaar ah ay u jirtay duqeyntu waxay dhacday duullaankii 2003 ee Ciraaq, kaas oo lagu arkay 18,695 duqeyn cirka Mareykanka.
Waxa kale oo ay ahayd sannadkii ugu dhiig-daadashada badnaa rayidka intii u dhexeysay 9/11 ilaa hadda, iyada oo 5,529 ay naftooda ku waayeen duqaymaha Mareykanka, inta ugu badan intii lagu jiray duullaanka, ayay tiri Airwars, iyada oo soo xiganaysa kooxda raadraaca ee Ciraaq.
Hawlgallada ka dhanka ah IS intii u dhexeysay 2015 iyo 2017, qiyaastii 9,000 oo duqeymo cirka ah ayaa dhacay sannad walba.
Tani waxay 2017 ka dhigtay sanadkii labaad ee tirada ugu badan ee dhimashada rayidka, iyada oo 4,931 “ay u badan tahay in la dilay”, inta badan weerarada la sheegay in isbahaysiga uu Maraykanku hoggaaminayo ka wadaan Suuriya iyo Ciraaq.
Tirooyinka barnaamijka Qiyaasaha Dagaal ee Jaamacadda Brown waxay soo jeedinayaan in ilaa 370,072 qof oo rayid ah ay ku dhinteen “dagaalladii 9/11 kadib”.
Xaddiga ballaaran ee tirakoobka Airwars ee dhimashada duqeyntii Mareykanka waxaa sabab u ah “waxyaalo badan oo aan la garanayn marka ay timaaddo waxyeellada dadka rayidka ah ee dagaalka”, ayay ku tiri tirakoobka.
Kooxdu waxay sheegtay inaysan sidoo kale awoodin inay ka saarto dhimashada ay sababtay “madaafiicda iyo rasaasta kale ee culus” mararka qaarkood.
Sidoo kale ma aysan caddeyn haddii ciidamada Mareykanka ay mas’uul ka ahaayeen duqeyn kasta oo gaar ah oo lagu qaaday tirooyinka Airwars, sida dagaalka ka dhanka ah IS markii ay wada -hawlgalayaasha kale ee isbahaysiga – oo ay ku jiraan Faransiiska iyo UK – ay iyaguna ka qeyb qaateen.
Falanqeyn: Duqeymaha cusub ee diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee hoos yimaada maamulka Madaxweyne Joe Biden ayaa su’aalo ka keenay jihada mustaqbalka ee siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee Soomaaliya.
In kasta oo markii hore ay u muuqatay in Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu damacsanaa in uu sii wado dib u soo celinta ku lug lahaanshaha millatari ee Washington ee tobanaanka sano, maamulkiisu wuxuu dhowr jeer duqeymo cirka ah ku qaaday kooxda fadhigeedu yahay Soomaaliya ee Al-Shabab tan iyo 21-kii Luulyo.
In kasta oo Al-Shabab ay ka tabar daran tahay sidii hore, haddana ciidanka Soomaaliya ayaa sannadkan sii wada hawlgallada ka dhanka ah ururkaas, maadaama ay weli halis ku yihiin xasilloonida dalka, haddana in kasta oo sannado badan ay socdeen ololeyaal ka dhan ah argagixisada. Tani waxay daba socotaa go’aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ahaa in ciidamada Mareykanka si buuxda looga saaro Soomaaliya bishii Janaayo.
Weerarada dhanka cirka ah, maamulka Madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay inay Kenya u diri doonaan ciidamo hawlgal oo gaar ah, kuwaas oo ku biiri doona ciidamada dalka u gaarka ah ee dagaalka kula jira garabka Al-Qaacida.
“In kasta oo Madaxweyne Joe Biden uu markii hore damacsanaa in uu sii wado dib-u-dhiska ciidammada Washington ee tobanaanka sano ku jiray Soomaaliya, haddana maamulkiisu wuxuu dhowr jeer duqeymo cirka ah ku qaaday Al-Shabab tan iyo bishii Luulyo”
Tan iyo 1992-kii, Maraykanku wuxuu inta badan ku lug lahaa dagaalada dhulka iyo cirkaba, ka dib markii dalku galay dagaal sokeeye, burburkii taliskii Siyaad Barre 1991. Hase yeeshee muddada dheer, tani ma aysan keenin hagaajinta xasilloonida Soomaaliya.
Isku soo wada duuboo, Al-Shabab waxay awood u yeelatay inay soo ifbaxdo 2006 waxayna ka samaysay kacdoonno waaweyn gudaha Soomaaliya iyo dalalka ku xeeran. Washington waxay kooxdan u aqoonsatay urur argagixiso sannadkii 2008 waxayna isku dayday inay kooxda ku qaado olole cirka ah.
Waxaa jira guulo laga gaaray in laga takhaluso maamulka Al-Shabab. Faragelin Maraykan iyo Midowga Afrika ay Itoobiya ku taageereen 2006, oo ka timid codsiga dawladda Soomaaliya, ayaa gacan ka geysatay in kooxda laga fogeeyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu dooday in faragelinta noocan oo kale ah ay sii xagjirisay Al-Shabab oo ay ka dhigtay inay qaadato mowqif adag oo ka dhan ah Itoobiya iyo Mareykanka. Kooxda ayaa weli awood u leh inay fuliso weeraro argagaxiso oo argagax leh sanadihii la soo dhaafay.
Xilligii Joe Biden uu ka leexday Soomaaliya, waxaa jiray walaac laga qabay sharcinimada sii wadidda faragelinta Mareykanka. In kasta oo Washington ay codsatay Oggolaanshaha 2001 ee Adeegsiga Xoogagga Milateriga kooxaha argagixisada ah ee weeraray Mareykanka 9/11, haddana qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Dimuqraaddiyadda ayaa ku andacooday in duqeymaha cirka ee dhowaan ay ahaayeen “kuwo aan dastuuri ahayn.”
Sida Senator Ben Cardin, oo xubin sare ka ah Guddiga Xiriirka Dibadda ee Senate-ka, ayaa ku dooday in tallaabada maamulka Biden ay tahay mid aan waafaqsanayn dareenka ka dhex jira shirweynaha Mareykanka.
“Waxaan u maleynayaa in Madaxweyne Joe Biden ay tahay inuu soo gudbiyo oggolaansho cusub oo ku aaddan adeegsiga awoodda millateri waana inuu garwaaqsadaa in 2001 AUMF la joojiyo,” ayuu raaciyay Cardin.
Habka Washington u wajahayso Soomaaliya, in kasta oo ay ku hawlgasho arrimo la-dagaallanka argagaxisada, waxay sababtay burbur maxalli ah, oo ay ku jiraan dhimashada rayidka. Amnesty International ayaa horay u sheegtay in duqeymaha cirka ee Mareykanka ay sidaas darteed noqon karaan xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah ee bani’aadamnimada.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee The Guardian, Waxaa jira cadeymo la isku halleyn karo oo muujinaya in duqeymaha militariga Mareykanka ee Soomaaliya ay ku dileen ama ku dhaawaceen ku dhowaad labaatameeyo rayid ah, koox caalami ah oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay, iyagoo ku amraya Pentagon inaysan si ku filan u baareynin qasaaraha.
“In kasta oo Mareykanku uu ku lug lahaa militariga dalka, haddana dadaal yar ayaa laga sameeyay si loo hubiyo in la dhiso ciidan boolis oo xooggan iyo ciidan qaran”
Isaga oo ka hadlaya saamayntii hore ee duqeymaha cirka Mareykanka ee la dagaalanka Al-Shabab, Dr Maxammed Ibraahim Shire, oo wax ka dhiga Jaamacadda Portsmouth, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee The New Arab in ay jirto caddeyn muujineysa in dadaallada milateri ay markii hore hoos u dhigeen xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo xakamaynta dhuleed ee kooxda. Runtii, tani waxay awood u siisay dowladda Soomaaliya inay ballaariso saameynta ay ku leedahay dalka, ayuu raaciyay.
“Si kastaba ha ahaatee, Al-Shabab waa dhaqdhaqaaq adkeysi leh oo ku guuleystay mararka qaarkood helidda qaabab cusub oo hawlgal ah ama u wareegidda xeeladaha kale ee rabshadaha wata, sida IED iyo weerarrada bambaanooyinka. Marka, in kasta oo duqeymaha cirka ay xaddideen dhaqdhaqaaqa kooxda xagjirka ah, haddana si buuxda uma dumin awoodeedii hawlgal, ”ayuu yiri Dr Maxammed Ibraahim Shire.
Casharrada laga baran karo Afgaanistaan
Dhacdooyinka naxdinta leh ee ka dhacay Afgaanistaan, oo ay Daalibaan qabsatay guud ahaan dalkaas, bishii Ogoosto oo ay qabsadeen caasimadda Kabul, waxay si weyn noo xusuusinaysaa cawaaqibka Washington oo ku guuldaraysatay qorshaheeda xassilinta dalka Afgaanistaan ​oo inta badan diiradda saareysa argagixisada.
Maamulka Madaxweyne Joe Biden wuxuu rumeysan yahay in walaaca ay ka qabaan Afgaanistaan wax laga qabtay illaa heer ay hoggaamiyeyaasha Daalibaan ballanqaadeen inaysan u oggolaan doonin koox kasta oo xagjir ah inay u adeegsato dhulka Afgaanistaan ka soo horjeedka Washington ama waddan kale oo adduunka ah.
Maraykanku wuxuu u malaynayaa inuu gaaray hadafyadiisii oo uu awood u yeelan doono inuu wax ka qabto dawlad kasta oo mustaqbalka ka jirta Kaabul oo aan u hanjabin danaheeda, xittaa haddii ay u hoggaansanto shuruucda caalamiga ah ee aan ka badnayn maamulada Kuuriyada Waqooyi, Myanmar iyo Iiraan.
“Maraykanka iyo xulafadiiisa waxaa Afgaanistaan uga baxay in ku dhow labo tiliriyoon oo doolar oo hanti ah, waxaa uga dhintay kummanaan askar iyo shaqaale rayid ah, iyo dhaawac intaas ka badan. Afgaanistaan waa dal ay ku lug lahaayeen quwadaha dunida ugu awoodda badan. Maraykan iyo xulafadiisa galbeedka, Shiinaha, Ruushka, Bakistaan, Iiraan, Hindiya iyo Turki.
Waxaa la oran karaa khasaaraha naf iyo hanti ee Maraykanka iyo xulafadiisa ugu kacday joogitaankooda Afgaanistaan iyo loolanka jofqraafi siyaasadeed (Geopoliticals), ayaa ka mid ah sababa uu Maraykanka iyo xulafadiisaba uga baxeen dalkaas.
Laakiin sababka ugu wayn ayaa laguu sheegay in uu yahay fashilka siyaasiyiinta iyo hoggaankii dalkaas soo maray ku dhacay. Waxey noqdeen dad danaysi, eex, musuqmaasuq, takrifal, tanaasul la’aan, aragti gaabni iyo awood marooqsi ku sifoobay. Taasi waxay sababtay in adduunku quus ka istaago dhaqanka iyo caadada siyaasiyiinta Afgaanistaan, la isagana dhexbaxo.
Ummad kasta oo aan si dhab ah u wajihin caqabadaha ku hor gudban dowlad dhiska, runta iskaga sheegin xaaladda ay ku sugan tahay, waxay mari doontaa waddada Afgaanistaan. Soomaaliya kuwaas kama foga.
Waxaa jiray walaac ku saabsan ka bixitaanka Mareykanka ee Soomaaliya bishii Janaayo 2021, marka la eego taariikhda dheer ee faragelinta Mareykanka ee gudaha dalka. In kasta oo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta reer Galbeedka ay hoos u dhigeen saamaynta ka bixitaanka Mareykanka, haddana qaar ka mid ah rayidka Soomaaliyeed ayaa ka baqay nusqaamaha amniga ee dalka.
Isku soo wada duuboo, in kasta oo Mareykanku uu ku lug lahaa militariga dalka, haddana waxaa jiray dadaal yar oo lagu xaqiijinayo in la helo ciidan boolis oo xooggan iyo ciidan qaran.
“Mid ka mid ah khaladaadkii dhaldhalaalka ahaa ee Mareykanku ka galay Afgaanistaan wuxuu ahaa dayacidda ciidanka booliiska qaranka Afghanistan – oo ah hay’ad qaran oo muhiim ah,” – ayuu yiri Dr Maxammed Ibraahim Shire.
Marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya, Dr Maxammed Ibraahim Shire wuxuu raaciyay, “Washington waxay bixin kartaa taageero muhiim ah si loo xoojiyo doorka hawlgalka ee hay’adaha sharci fulinta gudaha halkii laga tababari lahaa xoogagga ka soo horjeeda. Ciidan booliis ah oo karti leh ayaa samayn kara waxyaalo muhiim ah oo ku wajahan hanjabaadaha Al-Shabab ”.
Runtii, Washington waxay ku dhex-milmatay Soomaaliya hawlgalladeeda la-dagaallanka argagixisada, taas oo abuurtay ku -tiirsanaan Maraykanku ku sii joogo Soomaaliya, sida Afgaanistan. Si loo baajiyo xaddidaadaha amniga ee ka jira gudaha Soomaaliya, khubarada qaar ayaa sheegaya inay waxtar yeelan doonto in la hubiyo inay jiraan diyaargarowyo waara oo loo sameeyo dalka si uu u sugo ammaankiisa.
Saamaynta jofqraafi siyaasadeedka (geopolitical)
Rabitaanka Washington ee ah inay sii haysato saamaynta milateri waxay kaloo yeelan kartaa saamayn goboleed. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaysan rabin inay wax ka qabato dagaalka Itoobiya ee gobolka Tigray, in kasta oo ay cambaareyneyso falalka Addis Ababa ee gobolkaas.
Ugu dambeyntiina, Addis Ababa waxay u ahayd xulafada amniga ee Washington, waxayna tani muujineysaa inay aad u doonayso inay sii waddo iskaashigan ku aaddan hawlgallada ka dhanka ah Al-Shabab.
Ku lug lahaanshaha Washington ee Soomaaliya ayaa sidoo kale imaaneysa iyadoo ay sii kordheyso xiisadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee kala dhexeeya Shiinaha, iyadoo Washington ay weli rajeyneyso inay ka hortagto awoodda sii kordheysa ee Beijing ee Afrika. Dhanka kale Beijing waxay u arki kartaa hoos udhaca Washington inuu yahay fursad lagu balaarinayo saamaynteeda Geeska Afrika.
Shiinaha ayaa dabciyey muruqyadiisa maaliyadeed si loo sugo raad dhaqaale oo weyn ee qaaradda ah. Dhanka deymaha, maal -galiyayaasha Shiinaha ayaa $ 153 bilyan u ballan qaaday amaah -bixiyeyaasha qaybta dadweynaha ee Afrika intii u dhaxaysay 2000 iyo 2019.
In kasta oo Washington ay caadiyan ahayd lamaanaha ugu weyn ee ganacsi la leh waddamada Afrika, Shiinaha ayaa si weyn u buuxiyay booskan qarniga 21aad, iyada oo si dhakhso leh uga sarreysay Mareykanka tobankii sano ee la soo dhaafay.
Xataa Geeska Afrika, Shiinuhu wuxuu noqday jilaa awood badan leh. Waxay kor u qaadday caga -dhiggeeda ganacsi ee dekadda Jabuuti oo xitaa waxay noqotay jilaa muhiim u ah Soomaaliya. Waxay maalgelisay kaabayaasha dhaqaalaha, daryeelka caafimaadka, waxbarashada, isboortiga, beeraha, iyo biyo-gelinta.
“Dhacdooyinka naxdinta leh ee Afgaanistaan waxay si weyn u xusuusinayaan cawaaqibka Washington oo ku guul darreysatay inay dhisto qalab amni oo waara iyadoo inta badan diiradda saareysa la dagaallanka argagixisada”
Sidaa darteed Washington waxay ku tilmaantay hanjabaadda sii kordhaysa ee Shiinaha ee Afrika inay tahay khatar. Bishii Abriil, jeneraalka ugu sarreeya Mareykanka ee Afrika Stephen Townsend ayaa ku andacooday in Shiinuhu u adeegsan karo awoodiisa dhaqaale si uu u xoojiyo awooddiisa ciidan, gaar ahaan Geeska Afrika.
“Waxay raadinayaan meel ay dib u hagaajin karaan oo ay dayactiri karaan maraakiibta dagaalka. Taasi waxay noqonaysaa mid milatari ahaan waxtar u leh iskahorimaadka,” ayuu yiri Townsend, oo ah madaxa taliska Mareykanka ee Afrika. “Waxay aad ugu sii jeedaan inay taas ka hirgaliyaan Jabuuti. Hadda waxay indhahooda saarayaan xeebta Atlantika iyagoo doonaya inay saldhig noocaas ah halkaas ka helaan.”
Laakiin halkii laga sii wadi lahaa faragelinta milateri, waxaa muhiim ah in Washington ay taageero siiso ciidamada ammaanka qaranka Soomaaliya, maadaama Soomaaliya oo qudha ay ugu dambeyn ka adkaan karto Al-Shabab.
Maalgashiyada noocan oo kale ah ee firfircoon waxay sidoo kale u noqon karaan dheelitirnaanta saamaynta Shiinaha waxayna noqon karaan hab wax ku ool ah oo kor loogu qaado xasilloonida Soomaaliya.